Etu ị ga-esi weghachi na ụdị nke gam akporo | Gam akporosis
Etu ị ga-esi weghachite ụdị nke gam akporo gara aga
Ignacio Sala | 01/07/2021 10:00 | Emelitere ka 01/07/2021 14:35 | Nkuzi
Newdị ọhụrụ ọ bụla nke gam akporo gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arụmọrụ ọhụrụ, nke a na-esonyere ya ndozi ndozi. Maka nke a, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị wụnye ụdị gam akporo kachasị dị na oge niile, yana mmelite nche dị iche iche nke onye nrụpụta na-ewepụta kwa ọnwa ma ọ bụ kwa ọnwa.
Agbanyeghị, n'oge ụfọdụ, ọdụ ụgbọ ahụ anaghị azaghachi na ọ kwesịrị yana ohere weghachi gam akporo version. Ihe mbụ anyị kwesịrị ịma banyere usoro a bụ na ọ dabere na mgbanwe dị iche iche metụtara onye nrụpụta, nnweta nke ụdị ...
1 Etu ị ga-esi weghachite ụdị nke gam akporo gara aga
1.1 Weghachi Samsung na mbu nke gam akporo
1.2 Weghachite Huawei na ụdị gam akporo gara aga
1.3 Iweghachi otu OnePlus na ụdị nke gam akporo gara aga
1.4 Weghachi Oppo ka a na mbụ version nke gam akporo
1.5 Iweghachi Realme na ụdị gam akporo gara aga
1.6 Weghachi Xiaomi na nke mbu nke gam akporo
2 Kwesiri ịlaghachi na nsụgharị ochie nke gam akporo?
3 Kedu ihe ọ pụtara iweghachi na ụdị nke gam akporo mbụ?
4 Ebe ibudata nsụgharị ochie nke gam akporo
Iweghachi na nsụgharị gam akporo, dịka m kwuru n'elu, bụ usoro metụtara ọtụtụ ihe. Nke mbu na nke mbu bu na onye ọ bụla na-emepụta ihe na-eji ụzọ dị iche iche eme ihe Iji mezuo usoro a, ya mere dabere na onye mepụtara ọdụ anyị, anyị ga-emerịrị otu usoro ma ọ bụ ọzọ wee jiri ụfọdụ ngwa na ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ọnụ, anyị nwere ike ịme usoro a site na ibudata ROM ozugbo na kaadị ebe nchekwa, ndị nrụpụta ndị ọzọ na-akpọ anyị oku jiri ngwa kọmputa inwe ike imezu usoro a. Na dị ka ọ nwere ike, mgbe ahụ anyị na-egosi gị, Olee ihe enyemaka, nzọụkwụ na-eso iji weghachi a gara aga version nke gam akporo.
Weghachi Samsung na mbu nke gam akporo
Ruo afọ ole na ole, ngwa Samsung mere ka ndị ahịa ya wụnye nsụgharị nke gam akporo ọhụrụ, yana nke ochie, agakwaghị akpọ Odin ka Samsung Smart gbanwee, ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu site na njikọ a na gini bu dị maka ma Windows ma Mac.
Ozugbo anyị ebudatara ngwa a na ụdị nke ngwa ahụ nke anyị chọrọ ịwụnye ya, anyị na-emepe ngwa ahụ ma soro usoro niile nke ngwa ahụ na-egosi anyị ka anyị nwee ike ịme ya Iweghachi na nke gara aga nke gam akporo.
Weghachite Huawei na ụdị gam akporo gara aga
A na-akpọ ngwa ahụ onye nrụpụta Asia nyere anyị ka anyị laghachi na nsụgharị ndị gara aga nke gam akporo Huawei HiSuite, ngwa anyi nwere ike budata n'efu na njikọ a ma dị maka Windows na Mac.
Na mgbakwunye na iweghachi na nke gara aga nke gam akporo, anyị nwekwara ike ime akwụkwọ nchekwa, jikwaa data niile echekwara na ngwaọrụ anyị, weghachite usoro, wụnye ngwa ahụ.
Iweghachi otu OnePlus na ụdị nke gam akporo gara aga
N'adịghị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ na-amanye anyị ka anyị jiri ngwa sitere na kọmputa, Onye nrụpụta OnePlus na-eme ka usoro a dị mfe na ngwa ngwa, ebe ọ bụ naanị na anyị ga - e copyomi ROM anyị chọrọ ịwụnye na ya. nchekwa dị n'ime ma ọ bụ nke mpụga nke ngwaọrụ ahụ.
Mgbe ejiri smartphone gbanyụọ, anyị pịa bọtịnụ ike yana bọtịnụ gbanye ụda iji nweta menu mmalite ngwaọrụ, ebe anyị ga-ahọrọ nhọrọ mgbake ma họrọ ebe faịlụ nke nwere ROM nke anyị chọrọ ịwụnye dị.
Weghachi Oppo ka a na mbụ version nke gam akporo
Na-atụle na ma Oppo na OnePlus, ndị nọ n’otu otu, usoro iji weghachi ụdị nke gam akporo gara aga bụ otu ihe ahụ na ngwaọrụ abụọ ahụ. Ihe mbụ ị ga - eme bụ idetuo onyonyo nke ụdị gam akporo nke anyị chọrọ iji weghachi na nchekwa ngwaọrụ.
Mgbe ahụ, ejiri smartphone gbanyụọ, anyị pịa bọtịnụ ike yana bọtịnụ gbanye ụda iji nweta menu mmalite ngwaọrụ, ebe anyị ga-ahọrọ nhọrọ mgbake ma họrọ ebe faịlụ echekwara dị.
Iweghachi Realme na ụdị gam akporo gara aga
Usoro iji weghachite ụdị nke gara aga na ekwentị gam akporo ọ bụ otu ihe ahụ dị ka na Oppo na OnePlus, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ atọ ahụ bụ otu akụkụ otu azụmahịa.
Ozugbo anyị coomiri ROM na nchekwa ngwaọrụ, anyị gbanyụọ ngwaọrụ ahụ. Mgbe ahụ, anyị pịa bọtịnụ ike yana bọtịnụ gbanye ụda iji nweta menu mmalite ngwaọrụ, ebe anyị ga-ahọrọ nhọrọ mgbake ma họrọ ebe faịlụ echekwara dị.
Weghachi Xiaomi na nke mbu nke gam akporo
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ ndị Asia na-ebupụta kwa afọ, ohere nke ịchọta ụdị gam akporo anyị chọrọ nwere ike ịbụ ozi na-agaghị ekwe omume. Y’oburu n’inwe obi oma ihu ya, anyi gaba detuo ROM na mgbọrọgwụ nke nchekwa dị n'ime nke ngwaọrụ anyị.
Mgbe ahụ, anyị na-aga na Ntọala nke ngwaọrụ anyị, pịa na Ngwaọrụ m ma họrọ Nweta nkwalite.
Na-esote, pịa isi ihe atọ ahụ kwụ ọtọ wee pịa Họrọ ngwugwu ngwugwu, anyị họrọ faịlụ, nke anyị na mbụ renamed dị ka update.zip na usoro mweghachi ahụ ga-amalite.
Downgrade na gam akporo, bụ okwu eji na Bekee iji laghachi na mbụ ụdị gam akporo. Nke a bụ okwu ị kwesịrị iji chọọ mkpanaka mkpanaka ROM na Bekee, ebe ọ bụ na dabere na ihe nlereanya ahụ, ọ ga-abụ na ị gaghị achọta ozi na Spanish, n'agbanyeghị ịbụ asụsụ nke atọ a kacha asụ n'ụwa na-eso Chinese na India.
Kwesiri ịlaghachi na nsụgharị ochie nke gam akporo?
Ihe mere nwere ike ịmanye anyị laghachi a gara aga version nke gam akporo, kwesịrị mgbe niile na-aga site a arụmọrụ ngwaọrụ adịghị mma, karịsịa ma ọ bụrụ na mmelite mbụ.
Site na Ntuziaka gam akporo, anyị na-akwado gị mgbe niile chere ụbọchị ole na ole ịmara nzaghachi nke eyelyadopters ma si otú a nwee ike inyocha ma ọ bara uru imelite ma ọ bụ chere ụbọchị ole na ole maka nsogbu ndị enwere ike iweta ụdị ọhụrụ ahụ ka edozie.
Ọ bụrụ na mgbe emesịrị melite ngwaọrụ gị na ụdị gam akporo ọhụrụ, ọ malitere ịrụ ọrụ n'echeghị echiche, onyinye dị ugbu a, malfunctions na ọ bụ naanị gị bụ onye ọrụ na-ahụ ụdị nsogbu ndị a, ọ ga-abụ na ọ bụghị ụdị nke gam akporo na ị rụnyerela, mana ihe nrịba ama na mkpa ka ị tọgharịa ngwaọrụ gị site ọkọ.
Mgbe ị na wụnye ụdị gam akporo ọhụrụ, ọ karịrị karịa ka akwadoro ime ya site na ncha, ya bụ, weghachite ọnụ na mbido. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị ata ahụhụ nsogbu ọ bụla na ụdị nke gam akporo dị ugbu a, anyị agaghị ịdọrọ ya mgbe emelite ka ọhụrụ version nke gam akporo.
Kedu ihe ọ pụtara iweghachi na ụdị nke gam akporo mbụ?
Usoro iji weghachi na nke gara aga nke gam akporo, a na-apụghị izere ezere na-egosi hichapụ ọdịnaya niile echekwara na ọnụ, yabụ tupu ị rụọ usoro a, anyị ga-eme nnomi ndabere nke ọdịnaya niile anyị chọrọ ịdebe.
Akụkụ ọzọ nke anyị ga-eburu n'uche bụ na ọ naghị adị mfe mgbe niile ịlaghachi na nke gara aga nke gam akporo. Manufacturersfọdụ ndị nrụpụta na-emechi ohere ahụ, dịka Apple na-eme ọhụụ ọ bụla iOS wepụtara.
N'ụzọ dị otú a, ndị nrụpụta na-ahụ na ndị ahịa ahịa, mgbe niile nwere ihe ọhụrụ version nke gam akporo, site na mmelite nche niile etinyere, na mgbakwunye na ọrụ ọhụrụ ndị agbakwunyere iji nweta ọtụtụ akụrụngwa.
Ebe ibudata nsụgharị ochie nke gam akporo
Nke a bụ otu n'ime nsogbu anyị na-eche ihu mgbe anyị chọrọ ịlaghachi na nke gara aga nke gam akporo, ebe ọ bụ na ọ dịghị mfe ịchọta ROM ndị akọwapụtara nke ọnụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ ama Samsung, ihe ngwọta dị mfe, ebe ọ bụ na weebụsaịtị nke SamMobile (weebụsaịtị nke na-elekwasị anya na Samsung ruo ihe karịrị afọ iri), anyị nwere ike ịchọta nsụgharị niile enwere ma nwee nke njedebe gam akporo nke onye nrụpụta a.
Ọ bụrụ na ọnụ gị bụ Pixel, ọ ga-ekwe omume ịchọta ROM site na ibe weebụ dị iche iche na-elekwasị anya na ọdụ ndị a. Ihe na-agbagwoju anya ma ọ bụrụ na ọnụ anyị sitere n'aka onye nrụpụta ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume. Na weebụsaịtị nke Ndị na-emepụta XDA Nwere ike ịchọta ROM nke ọtụtụ ọnụahịa, ma ọ dịkarịa ala ndị na-ere ahịa kacha mma, yana ntuziaka iji mezuo usoro ahụ.
Ibe weebụ ọzọ na-adọrọ mmasị anyị ga-eburu n'uche mgbe chọta otu agadi version nke gam akporo site na ọnụ na-abụghị Samsung, ọ bụ HTCmania, otu n’ime ọgbakọ ndị na-ewu ewu na Spanish na ekwentị mkpanaaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu ị ga-esi weghachite ụdị nke gam akporo gara aga
Esi emeghe faịlụ APK na PC
Mụ agbọghọ 6 kachasị mma maka gam akporo